गणतन्त्र गुण्डातन्त्रले चल्दैन
जनता सहन्छन्, सक्नेजति सहन्छन्, जब नेपाली जनताको सहनेशक्तिको बाँध फुट्छ, त्यसपछि जनता सुनामी जसरी निस्कन्छन् र केही पनि बाँकी नराखी सोत्तर बनाउने गर्छन् ।
नेपाली जनताको स्वभाव यस्तै छ र यही स्वभावका कारण जनबिरोधी कम भइरहदा पनि जनता सहिरहेछन् ।
भन्नका लागिमात्र लोकतन्त्र, गणतन्त्रको संस्थागत गर्न जुनसुकै हदसम्म जान सक्छौं भन्ने हो । यथार्थमा गणतन्त्रको बिराधेी माहोल खडा गर्ने हो । एकजना विश्लेषक सत्ताधारी र विपक्षीको यसरी आँकलन गर्दैथिए । तिनका अनुसार सत्ताधारी नै आम नेपालीका माझ वर्तमान शासन व्यवस्थाका विरुद्ध वातावरण बनाउादै छन् । ढुक्क हुनोस्, राजाबादीहरुले अव धेरै मेहनत गर्नै पर्दैन । ती विश्लेषकको आँकलनलाई घोत्लिएर विचारगर्दा होजस्तो लाग्छ ।
घात, प्रतिघात, अन्तर्घात, राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, राज्यआतंक, गुण्डागर्दी, राष्ट्रको सम्पत्तिदोहनजस्ता मुद्दाहरुलाई विचार गर्दा पनि मैमत्ता बनेको सत्ताधारी र कमजोर विपक्षी दुबैथरि वर्तमान संविधानको खारेजीमा प्रमुख भूमिका खेल्दैछन् । हामी सबैका सामु बडादशैं २०७६ आइपुगेको छ । तर बजारभाउ छेइनसक्नु गरी बढेको छ, कृतिम मूल्यबृद्धि गर्न नियन्त्रण र निगरानी छैन । सवारी जामले बिरामी यात्रु बाटोमै मरेका छन् । यी सब घटनाले तीन तहको सरकारको औचित्य समाप्त भइसकेको छ ।
खरवौं भ्रष्टाचार भएको मुद्दालाई एकछिन पन्छाउँ, जाबो सडक जाम खुलाउन नसक्ने यो गणतान्त्रिक संविधानले बनाएको तीनतहको सरकारमाथि जनताको आक्रोश दिनदिनै बढेको छ । ससाना अनियमिततामा सरकारी संलग्नता अनुभव गरिदैछ । हालै चितवनमा भ्रष्टाचारबिरोधी अभियन्तालाई सत्ताधारी पार्टीका भिजिलान्तेले गरेको गुण्डागर्दी अचाक्ली नै हो । कुनै जरुरी थिएन राज्य जाइलाग्न, सत्ताधारी पार्टीका अध्यक्ष र उनकी छोरी चितवनकी मेयरको नाम बदनाम गर्न । सत्ताको बिरोध गरेको नाममा रामधुलाई, गुण्डागर्दी ? यो काण्डले गणतन्त्र र लोकसरकारमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह उठ्न पुगेको छ । अनावश्यक कुरामा हात हालेर वर्तमान सरकार र सत्ताधारी पार्टीहरु गणतन्त्र दिनदिनै सिध्याउन थालेका छन् ।
गुठी बिधेयक आयो, सडकमा सरकारको दोहोलो काढियो । मिडिया विधेयक आयो, यसमा पनि सरकारकै बदनामी भयो । एउटा जाबो सानो विज्ञापन सरकारको कृषि विभागले जारी ग¥यो । स्वस्थ र स्वच्छ मासु खाऔं भनेर विज्ञापनमा गाईलाई घुसाइयो । गाई खान पाइन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह ग¥यो । यसबाट हिन्दुहरु कम्युनिष्ट सरकारसँग बेस्सरी चिढिन पुगेका छन् । सरकार भन्छ– गाई कसरी घुसेछ, थाहा भएन रे । सरकारको यो भन्दा ठूलो मजाक के हुनसक्छ ? यसरी गणतन्त्र सरकारले नै बदनाम गराइरहेको छ । गणतन्त्रको अर्को नाम भ्रष्टाचार र अनैतिक हुनपुगेको छ ।
निर्मला हत्याकाण्ड, ३३ किलो सुन, वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार, एनसेललाई छुट प्रकरण अनेक छन् सरकारले गरेका कुकर्मका फेहरिस्त । हिजो गणतन्त्र आएपछि स्वर्ग पाइन्छ भनने जुन प्रकारको विज्ञपान गरिएको थियो, त्यो सब भ्रम छरेकोमात्र रहेछ । यो शासन व्यवस्था मुठ्ठिभरका लागि मात्र स्थापना भएको रहेछ । यस्तो अवस्थामा साँच्चिकै लोकतन्त्र, गणतन्त्र संस्थागत गर्ने मनसाय हो भने त सरकारले सबैलार्ई एकजुट पारेर अघि बढ्थे । विभेद र निषेध अनि अलोकतान्त्रिक कामहरु यसरी लखनौं लुटका रुपमा बढाउने थिएनन् ।
जनयुद्धपछि जनआन्दोलनमा जनतालाई जे जे बाचा गरिएको थियो, ती सबै हावादारी साबित भइसक्यो । सत्ताधारीका भाइछोराहरु पक्राउ पर्ने, सामान्य धरौटीमा छाडिने र तिनका अत्याचारले सीमा नाघ्न थालेको छ । हिजोभन्दा राम्रो हुन्छ भनेर भएका जे जति संरचनाहरु भत्काइए, आज झन नराम्रो परिस्थिति देखिएका छन् । यस्ता नेताको अनुहार हेरेर आमनागरिकले सहने, बस्ने अवस्था रहेन । अव चाँडै नै अर्को परिवर्तन हुनजरुरी छ । ठग र अनैतिकका लागि पाच्य नहोला, तर जनता र देशको अस्तित्व रक्षाका लागि समेत परिवर्तन जरुरी भइसक्यो ।
परिवर्तनका संकेतहरु देखिन थालेका छन् । यो ब्रम्हलूट मच्चाउने संघीयता आर्यघाटतिर जाँदो छ । शायद यस्ता अत्याचारी संघीयताले अर्को दशैं मनाउने छैन ।